7 Talaabo oo Loo Sameynayo Video Suuq Geynaya Dilka | Martech Zone
Waxaan kor uqaadeynaa an fiidiyo muuqaal leh mid ka mid ah macaamiishayada xilligan. Waxay haystaan ​​hal tan oo soo booqdeyaal ah oo u imanaya goobahooda, laakiin ma aragno dadka oo aad u dheereeya. Sharaxe gaaban ayaa noqon doona aaladdii ugu fiicneyd ee la geeyo si loo helo soo-jeedintooda qiimaha iyo kala-soocida martida cusub qaab la yaab leh.
Daraasaduhu waxay muujinayaan in baahida macaamiisha ee ah waxyaabaha fiidiyoowga ah ay si aad ah kor ugu kaceen, iyada oo 43% ayaa doonaya inay arkaan fiidiyowyo badan ka yimid suuqleyda. Fiidiyowyada iyo waxyaabaha firfircoon ayaa si weyn uga dhex muuqday hawsha beddelka, iyadoo 51.9% ka mid ah suuqleyda ay sheeganayaan in fiidiyowgu uu leeyahay ROI-ka ugu fiican marka la barbar dhigo noocyada kale ee ka kooban. Xaqiiqdii, degitaanka bogagga leh fiidiyowyada ayaa horseeda 800% beddelaad badan. MicroCreatives
MicroCreatives, oo ah hay'ad adeeg-bixineed oo ka baxsan xeebta, ayaa soo saartay muuqaalkan muuqaalka leh - 7 Dariiqo Oo Loo Abuuro Video Suuq Geynaya Dilka - taasi waa inay caawisaa shirkad kasta ama hal-abuurka laad-ka-billowga mashruuca fiidiyowga ee ugu horreeya. Infographic wuxuu kugula socdaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah horumarinta mashruucaaga soo socda ee fiidiyowga.
Waa kuwan 7-da Talaabo ee Loo Abuurayo Video Suuq Geynaya Dilka
Go'aami fiidiyahaaga ujeeddooyinka iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha
Midig dooro nooca video content ujeedadaada
Dhex dhig agagaarka a sheeko sumadeed
Ha sameyn caajis noqo
Go'aanso halka la dhigo fiidiyowgaaga
Cabir oo falanqee waxqabadka
Waxaan si dhab ah ugu qanacsanahay inay ku bilaabeen hadafka maskaxda kuna dhamaadeen cabirka waxqabadka dadaalka!
Tags: sida loovideo suuq geyntaFiidiyowyada Suuqgeyntahal-abuurka yar-yarbaddaFilibiintalaabooyinkayoutube
Nov 23, 2017 at 6: 25 AM
Waxyaabaha fiidiyoowga ah ayaa aad muhiim u ah maalmahan. Oo caajis la’aan waa muhiim!